Ireo entana antitra sy lany andro hoy i Apple - ewa.mg
Ireo entana antitra sy lany andro hoy i Apple
Téchnologie - Ireo entana antitra sy lany andro hoy i Apple
Ny iPhone 5 dia lany andro hoy i Apple. Io finday io dia nampidirina tao amin'ny lisitra ny entana lany andro araka ny mason-tsivana napetrak'i Apple. Raha hazavaina misy misy kokoa izany dia ny iPhone 5 izay nivoaka tamin'ny taona 2012 dia efa "antitra" ho an'ny mpanjifa any Etazonia ary efa "lany andro" kosa ho an'ny firenena hafa, izany hoe tsy tokony hanantena "mise à jour" intsony izany ho an'io finday io, ary tsy manamboatra an'io finday io intsony ny ekipan'ny Apple raha sanatira ka simba ny finday iPhone 5. Marihana etoana anefa fa ny iPhone 5 dia nahazo tombony satria ny "garantie" nomen'i Apple ny iPhone 5 dia 6 taona raha tokony ho 5 taona izany.
Ao amin'io pejy an'i Apple io dia misy ny lisitry ny entana namboarin'i Apple efa lany andro rehetra. Ankoatran'ny iPhone 5 dia hita ao ihany koa ny Macbook nivoaka talohan'ny taona 2012, ny iPhone 4 sy ny teo alohany mazava ho azy, ny iPad "3ème génération" sy ny teo alohany sy ny entana maro samy hafa.
Afaka mijery an'io pejy io ianao raha ohatra ka te ahafantatra hoe ny entana novokarin'i Apple izay hananao ve dia efa lany andro sa tsia.
Nivoaka tamin'ny : 07/11/2018
Apple - Finday - IPhone
Iza no antivirus tena tsara ?
Afaka ny mamaky fampitahana antivirus maro isika ao amin'ny Internet. Afa mahita lahatsoratra maro toy ny hoe iza no top 10 amin'ny antivirus , fa ireny fampitahana rehetra ireny dia manana zavatra hitoviana : miankina amin'ny isan'ny zavatra afaka hataony izy ireo, miankina amin'ny vidina, na amin'ny fahalazany. Marina fa ny antivirus maimaimpoana sy miaraka aamin'ny zavatra maro dia mety ho tena tsara tokoa, kanefa ahoana marina ny amin'izany ? Iza no tena mahita virus ? Iza no afaka mahita virus tena izy ary maripototra ? Izany hoe iza no tena antivirus tsara ? Ezahantsika ho valiana eto izany. Marihana ety am-panombohana fa ity lahatsorata ity dia lahatsoratra nosintonina avy any amin'ny https://www.leblogduhacker.fr/. Ny antontan'isa izay hitanareo eto dia fanandramana izay tena nataon'io site io. Izany hoe ni-télécharger virus izy dia nojereny izany virus izany amin'ny alalan'ny antivirus. Rehefa vita izay dia nanao fanandramana faharoa izy ireo ka nijery programa tsy virus ary nojereny amin'ny alalan'ny antivirus. Ary farany dia nijery zavatra omen'ny antivirus ankoatran'ny fijerevana virus ihany koa izy, toy ny site web malveillants. Fanamarihana : Mety misy hiheritreritra hoe mijery programa malveillants, kanefa dia ny antivirus dia mampiasa ny antsoina hoe "heuristiques", izany hoe fomba fanadihadihana ny fihetsiky ny antivirus. Izany dia mamela an'ireo antivirus mahafantatra programa malveillant rehefa alefa izy. Ny andrana rehetra izay natao ivelan'ity lahatsoratra ity dia mampiseho fa tsy manova ny vokatra farany izay ho hita eo ambany eo izany. Vakio tsara ary !!! Ny lisitr'ireo antivirus Ny service omen'i VirusTotal dia mamela ny hi-scanner fichiers miaraka amin'ny antivirus mihisa hatramin'ny 50 indray mandeha. Ny antivirus izay ampiasain'i VirusTotal dia mety tsy hitovy amin'ireo izay hamidy ka hampiasaina isan'andro, fa tsy ho jerentsika izany. Ireto avy ary ireoa antivirus izay hanaovana ny ny fanandramana AVG Baidu F-Secure eScan TrendMicro AhnLab-V3 BitDefender Fortinet Microsoft TrendMicro-HouseCall Antiy-AVL Bkav Ikarus NANO-Antivirus VBA32 Comodo CAT-QuickHeal Invincea nProtect VIPRE GData CMC Jiangmin Panda ViRobot ALYac ClamAV K7AntiVirus Qihoo-360 Yandex AVware CrowdStrike Falcon (ML) K7GW Rising Zillya AegisLab DrWeb Kaspersky SUPERAntiSpyware Zoner Alibaba Cyren Kingsoft Sophos Arcabit ESET-NOD32 Malwarebytes Symantec (Norton) Avast Emsisoft McAfee Tencent Avira F-Prot McAfee-GW-Edition TheHacker Ireo izay mivohitra no tena malaza. Ny fitiliana an'ireo programa malveillant Amin'ity andiany voalohany ity dia ho-scanner-na ny programa malveillant maromaro ary hijery ny vokatr'izany eo amin'ireo antivirus 15 izay malaza. Ireo programa malveillant ireo dia tena malveillant tokoa satria efa nojervan'i leblogduhacker tsirairay izy ireo. Ireo programa ireo dia tsy miankina amin'ny antivirus iray ary tsy namboarina manokana mba tsy ho hitan'ny antivirus sasany. Izany hoe, nalaina tamin'izao fotsiny ireo programa ireo fa tsy misy hoe nosafidiana manokana. Fijerevana cheval de Troie Ny fijerevana cheval de Troie (Trojan) dia an'isan'ireo programa tena mampidi-doza, satria izy ieo dia afaka ny mibaiko tanteraka solosaina iray avy any alavitra. Noho izany dia tsy maintsy haita an'io cheval de Troie io ny antivirus izay safidiana. Izao ary ny vokatra : Fanamarihana : Fanahinihana notapahana ny sary fa manjary lasa mampidina lava be ianareo. Ireto avy ary ireo antivirus 15 ary miloko mena ny antivirus tsy nahita an'ilay cheval de Troie : AVG BitDefender McAfee Comodo ESET-NOD32 Microsoft GData F-Secure Sophos Avast Kaspersky Symantec Avira Malwarebytes TrendMicro Antivirus 11 amin'ny 15 no nahita an'ilay cheval de Troie. Fitiliana keylogger Ny keylogger dia an'isan'ireo programa malveillants tena miparitaka. Tena ilaina mihitsy ny mahita azy, ary mila hita faran'izay haingana izy, satria isan'andro dia misy keylogger maro no mandalo eo amin'ny solosaina iray izay afaka maka zavatra maro ao anatin'ny solosaina izy. Izay no antony nangalako keylogger izay hita iray volana lasa izay amin'izay tsy afaka miala olana ny antivirus. Izao ary ny vokatra : Mbola hampiasaintsika ny lisitra teo aloha, ary miloko mena ny antivirus tsy nahita an'ireo keylogger ireo : AVG BitDefender McAfee Comodo ESET-NOD32 Microsoft x2 GData F-Secure Sophos Avast Kaspersky x2 Symantec x2 Avira Malwarebytes TrendMicro Fanandramana roa dia antivirus 4 amin'ny 15 sisa no afaka nahita an'ireo program malveillants. Mametraka olana tokoa ny mahita hoe tsy maninona io programa io kanefa ity farany dia mifanohitra an'izany ! Satria ny mpampiasa solosaina iray izay manana ahiahy dia mety handefa an'io programa io amin'ny fahatokisana an-jambany an'ilay antivirus izay diso hevitra. Fitiliana ny mpangalatra information(stealer) Programa iray mpangalatra information dia malware namboarina manokana hitady sy hangalatra données voafaritra tsara ao anaty solosaina. Tsy afaka ny ho tenenina hoe madio ny programa tahak'izany. Eto isika dia tonga amin'ny fanandramana ka dia programa mpangalatra information tamin'ny janvier 2015 no hanaovantsika ny test. Maro ireo antivirus nahita azy, ho hitantsika eto manraka eto izany. Ito indray ary ilay lisitra antsika teo aloha izay navaozina : AVG BitDefender McAfee Comodo ESET-NOD32 Microsoft x2 GData F-Secure Sophos Avast Kaspersky x2 Symantec x2 Avira Malwarebytes x2 TrendMicro x2 Vaovao ratsy ho an'i Malwarebytes sy TrendMicro izay tsy nahita an'io programa mpangalatra information io. Manampy an'i Symantec, Microsoft ary Kaspersky izy ireo amin'ny tsy nahitany afatsy 2 an'ireo programa malveillant 3 izay nanaovana fanandramana. Eo ankilan'izay dia ny antivirus 4 izay nahita azy dia dia ny GData, BitDefender, ESET-NOD32 ary F-Secure. Fitiliana crypter Ny crypter dia fitaovana malveillant izay afaka ny manafina (chiffrer) ireo programa malveillants izay notanisaina teo aloha, amin'izay izy ireo dia tsy ho hitan'ny antivirus. Andao ary ho jerevana ny vokatry ny fitiliana ny crypter : Indrisy fa ny antivirus 15 dia tsy nahita azy, fa ireo antivirus ambiny ihany koa dia tsy nahita an'io programa malveillant io. AVG x2 BitDefender McAfee x2 Comodo x2 ESET-NOD32 Microsoft x3 GData F-Secure Sophos x2 Avast x2 Kaspersky x3 Symantec x3 Avira x2 Malwarebytes x3 TrendMicro x3 Famintinana mikasika ny fitiliana ny programa malveillants Hitanareo soritra izany fa tsy misy antivirus afaka ny miaro 100% ny solosainao. Ny antivirus dia tsy afaka ny miaro 100% izany. Tsy afaka ny miteny mihitsy isika hoe misy antivirus iray mahita programa malveillant bebekokoa noho ny hafa, na dia hitantsiaka teo aloha aza ny mifanohitra amin'izany. Satria raha ovaina ny programa malveillant ho tiliana dia mety hiova io valiny hitantsika io. Kanefa ny valiny farany dia tsy hiova : Tsy ampy ny antivirus irery. Na dia eo aza izany dia afaka ny hitako fa isan'andro dia mitombo ny isan'ireo antivirus afaka ny mahita ny programa malveillants izay notiliana teo. Izany dia manaporofo fa haingam-piasa ny mpanamboatra antivirus ka manome mises à jour isan'andro ary mizara izany amin'ny mpanamboatra antivirus hafa. Kanefa dia minitra vitsy na ora vitsy dia ampy aho an'ny piraty iray raha tsy mahita eo noho eo ilay programa malveillant ny antivirus. Raha handray ohatra mikasika an'ilay mpangalatra information isika dia vantany vao alefa ilay programa dia efa azony ilay information izany hoe latsaka ny iray segondra izany. Raha tsy hita eo noho eo ilay izy dia efa tara loatra. Tandremo !!! Tsy midika izany fa tsy misy ilana azy ny antivirus ! Ny filazana diso fa programa madio dia malveillants Izao indray dia hijery isika raha misy antivirus mahita programa madia kanefa lazainy fa tsy izany. Izany no antsoina hoe "faux positifs". Indraindra, ny antivirus dia mihezaka ny hamitaka ny mpampiasa azy amin'ny fahitana programa faran'izay betsaka mba hampisehoany fa mahita maro izy noho ny mpifanandrina aminy. Ka indraindray dia mety ahita programa tsy malveillant izy ireo. Fitiliana programa mampiseho ny momba momba ny solosaina Misy programa iray ohatra mamaky ny momba momba ny solosaina ka mampiseho izany fotsiny toy ny anaran'ilay solosaina, ny mémoire, ny disque dur ... Rehefa natao ny fitiliana dia izao no navaliny : Marihako etoana fa i Qihoo-360 dia nahita foana izy hatramin'ny voalohany ary milaza foana izy fa "Malware.Gen" ilay virus. Mety ataon'ny "Malware.Gen" ihany koa ve ny fichier texte izay misy soratra hoe virus ??? Vazivazy izany. Fitiliana programa mamantatra ny touchen'ny clavier voatsindry Misy programa iray indray mampiseho ny touchen'ny clavier voatsindry. Mampiasa ny fomban'ny "keylogger" izy fa tsy manao zavatra malveillant : tsy miafina io programa io, tsy mandeha rehefa velona ny solosaina, tsy mandefa n'inon'inona amin'ny réseau izay, tsy mi-sauvegarde n'inon'inona izay, ary diso aza indraindray ny apoitrany rehefa manindry touches. Andao ary ho jerena hoe iza no diso : Hitantsika eto fa i Avira sy ESET-NOD32 sy maro hafa dia mamoaka fampitandremana amin'ny tsy antony. Tsy miresaka intsony an'i Qihoo izaho izay mampiseho an'ilay fampitandramana "Malware.Gen". Fitiliana site web malveillants Ny ankamaroan'ny antivirus dia manana fonctionnalités afaka miaro amin'ny site web malveillants ary tsy mamela ny fidirana amin'ireny site ireny. Hijery an'i PhishTank.com site iray ahafahana ny mijerny ny site de phishing. Avy eo isika dia haka site de physing an'i Paypal izay tsy azo atao akory hoe site physing ary. Ny vokatr'ilay scan dia : Tsy nisy nahita ireo antivirus. Marihana anefa fa ny antivirus dia mitady an'ireo site ireo isan'andro, fa mety ho herinandro maro vao ahita an'ireo site ireo ny antivirus. Izany dia mety hamitaka olona maro. 2 andro taty aoriana dia izao no valin'ny fitiliana : Valo no nahita an'ilay site kanefa dia vitsy dia vitsy izany. Famintinana ny fitiliana ny programa sy ny site web madio Ny antivirus dia sahirana amin'ny fisafidianana ny fomba fitiliana programa amin'ny hoe jerena amin'ny ankapobehany ve ny programa ka mety ahita programa madio ka ho lazaina hoe virus izany, sy ny hijerena ny programa amin'ny antsipirihany ka mety tsy ahita sasantsasany. Eo ankilan'izay ny sites malveillants dia sarotra tiliana, indrindra indrindra fa misy nom de domaines maro voaforina ao anatin'ny iray andro. Ny antivirus zany dia tsy misy ilana azy ? Raha hita ireo vokatra teo aloha ireo dia marina tokoa ilay fanontaniana. Fa mila marihana anefa fa misy tranga izay ahitan'ny antivirus ny programa na site iray malveillant kanefa isika dia tsy mahafantatra an'izany. Raha fintinina izay rehetra noresahana teo izay dia : Tsy ampy ny antivirus ahafantarana ny virus rehetra ; Ny antivirus dia mety hiteny ny programa madio iray ho virus ; Ny antivirus dia afaka ny mahita ary mamafa programa malveillant iray. Noho izany dia tsy afaka ny miteny isika hoe ny antivirus izany dia tsy ilaina satria manampy antsika izy amin'ny fijerevana virus satria isika indraindray dia tsy malina tsara ny amin'ireny programa télécharger-na ireny na ny site izay hidirana ireny. Iza ary no antivirus tena tsara ? Mila manamarika zavatra aloha isika alohan'izany. Voalohany izay misongadina dia ny antivirus dia tsy manao ny asa rehetra eo amin'ny toerantsika. Hitantsika teo fa ny antivirus ao amin'ireo 15 izay malaza dia mahita virus betsaka mihoatra ny sasany. Fa rehefa nanao fanandramana maro ny leblogduhacker dia mitovitovy ihany izy rehetra ireo raha mitly virus aloha no resahina (ankoatran'ny antivirus izay mahita foana). Kanefa mila manao fanandramana lehibe kokoa isika vao afaka mahazo tarehimarika voafaritra tsara ny amin'ny fahitana virus. Andao ary ho valiana amin'izay ilay hoe iza ary no antivirus tena tsara. Amin'ny teny tokana : Izay manampy anao !!! Ankoatran'ny maha antivirus azy dia ny antivirus dia manome fonctionnalité maro samy hafa mba ahafahany miavaka amin'ireo mpifandrina aminy. Fa ho an'ny mpampiasa antivirus dia ilaina fantatra aloha inona no tadiavin'ity farany. Dia avy eo mijery izay omen'ireo antivirus ireo. Ary mifidy an'ilay antivirus amin'izay mba hifanaraka amin'ny zavatra andrasana. Ireto misy torohevitra amin'ny fomba fifidianana antivirus : Sauvegarde sécurié ary mandeha ho azy. Izy ito dia tena ilaina tokoa mba hiarovana amin'ny olana maro toy ny "ransomwares" ; Ny isan'ireo fitaovana afa arovany amin'ny licence iray mba hividianana licence farak'izay vitsy kanefa afaka miaro fitaovana maro (solosaina, finday) ; Ny "environnement d'exécution sécurisés". Izy io dia afaka mamela anao handefa an'ilay programa tsy misy hatahorana ao anaty environnement virtuel iray izay noforonina manokana ho an'io programa ka rehefa vita ny fampiasana an'ilay programa dia voafafa daholo izay noforinina niraka tamin'io environnement virtuel. Amin'izay ianao afaka manandrana hoe azo antoka ve ny programa iray sa tsia alohan'ny hitenenana azy amin'ny antivirus hoe programa malveillants io sa tsia. Ny contrôle parentales na ny fitahirizana mot de passe. Ankoatran'ny programa malveillant dia maro koa ny piratage izay mijery ny fomba fihetsiky ny olona ka mampiasa izany. Izy io ary no tena mandaitra indrindra. Ireo piraty dia : Milalao ny fihetsempoanao : tandremo fa misy virus ny solosainanao !. Izany no ampiasainy dia mi-cliquer an'ilay lien ianao dia tafiditra ny virus. Misaoloky : soloky eny amin'ny site de rencontre, sns... Mamitaka : mangalatra ny page Facebook, sns... Sy ny maro samy hafa. Ny antivirus dia tsy ahita an'ireo notanisaina ireo. Fa ny mpampiasa solosaina tsirairay dia afaka ny mahita an'ireo raha malina tsara ary raha manara-baovao. Ny antivirus tena tsara : IANAO miaraka amin'ny fitaovana fiarovana. Cet article a été tiré de https://www.leblogduhacker.fr/quel-est-vraiment-le-meilleur-antivirus/
Voatsindrona tamin'ilay fanamarihana nataon'i Apple i Mark Zuckerber ka dia nandidy ny mpiansany hampiasa finday Android ary tsy hampiasa ny iPhones-ny. Tsy tian'i Mark Zuckerberg ilay tsindrona kely nataon'i Tim Cook ny momba azy tamin'ny Mars farany teo. Nanontaniana izy momba an'ilay disadisa mikasika ny Cambridge Analytica, ka ny talen'ny Apple dia nanambara : "Izahay tsy manao trafika ny fiainanareo manokana. Ny fianana manokana ho anay dia zon'olombelona, fahalalahana sivily". Ny iPhone dia voararan'i Mark Zuckerberg ao amin'ny Facebook Ny kihana izay natao ho an'i Facebook dia tsy nisarona akory, ary i Mark Zuckerberg, araka ny voalazan'i New York Times, dia naneo hevitra avy hatrany ny amin'ny tsy hampiasain'ny ekipan'ny fitantanana ny hampiasa ny iPhones fa hampiasa ny finday mampiasa Android. Mba hanamarihany ny fanam-pahankeviny, ilay miliaridera dia nanindrona ihany koa avy eo hoe ny Android dia be mpampiasa lavitra noho ny iOS. Volana maromaro, ny mpitantana an'ireo orinasa roa ireo dia mifamely foana amin'ny alalan'ny haino aman-jery maro ny amin'ny fitantanana ny données amin'ny fianana manokana. Mbola ho ela vao hilamina ny raharaha. Nalaina tany amin'i 9to5Mac
Safidy amin’ny “workstation” sy ny PC
Ny mampiavaka ny PC sy ny workstation dia tsy mazava loatra ao amin'ny sain'ny mpampiasa azy, indraindray ary moa ny DSI no tsy mahita ny maha samy hafa azy. Vitsy ireo mahalala sy mahazo mazava tsara ny tena maha samy hafa azy ireo. Tsy dia tena mahagaga satria raha eo amin'ny taratasy dia mitovitovy ny paozin'izy roa ary mampiasa singa (composants) tena mifanakaiky tosy ny : processeur, mémoire RAM, carte graphique, disques durs iray na maromaro. Kanefa dia misy halavirana be amin'ny vidin'izy roa satria na dia mitovitovy ary izy ireo dia ireo fitaovana informatique ireo dia manana tanjona maro samy hafa ary mpanjifa sy fampiasana samy hafa. Ny workstation dia miava amin'ny PC amin'ny lafiny maro izay afaka hatambatra amin'ny fizarana fito. Ny workstation dia tena azo antoka tsara Natokana ho an'ny fampiasana matihanina ny workstation satria izy dia mampiasa singa tena tsara, azo antoka kokoa ary tena tsara kalitao. Ny asa izay ataony dia mitaky ny fiasàny amin'ny heriny rehetra ary indraindray 24H/24, 7j/7. Noho izany ny nanamboarana ny workstation dia manakaiky kokoa ny fanamboarana serveurs noho ny PC, satria fantatra tsara fa ny singa mora simba ao anatin'ny solosaina dia ny disque dur, ny alimentation ary ny mémoire. Ka izany no mahatonga ny workstation ny mampiasa controleurs RAID mba ahazoana miditra amin'ny données haingana kokoa ary mba tsy ho very ny données. Ohatra ny Dell Precision 7910 dia manana contrôleur RAID 12Gb/s vaovao, izay mampitombo indroa ny famakiana sy fanoratana ao anatin'ny disque dur ary manome fiarovana bebekokoa amin'ny fahafatesan'ny disuqe dur (Raid 1/6/10). Ny alimentation an'ny workstation dia namboarina ho faran'izay ngeza ary miankina amin'ny singa amin'ny kalitao ambony izy manome efficacité énergétique farany avo ary azo soloina moramora kokoa ary tsy mila fitaovana. Toy izany koa, ny mémoire ampiasain'i workstation dia mémoire ECC (Error Correction Code) mba ahafahana mijery sy milaza ny olona izay mety mitranga ao amin'ny mémoire nefa izany dia tsy manapaka ny asan'ny mpampiasa azy ary mampikatso ny solosaina. Les alimentations des stations Dell sont largement dimensionnées, basées sur des composants de haute qualité offrant une efficacité énergétique maximale (supérieure à 90%) et se remplacent en un seul geste sans le moindre outil. Raha jerena ohatra ny workstation Dell Prcision 5810, 7810 ary 7910 , izy ireo dia mampiasa ny teknolojia RMT (Reliable Memory Technology) izay mampiasa ny zavatra atolotrin'ny mémoires ECC mba hataony mody manjavona ny erreurs mémoires. Ny RMT dia manokana ny mémoires simba ary manafina izany amin'ny système d'exploitation. Conçues pour la productivité Ao amin'ny orinasa rehetra dia misy olona manana toerana manokana. Injeniera, graphistes, designers, statistisiana, dokotera, animateurs 3D dia mpiasa manana karama ambony izay ilaina ny mitazona azy hamokatra foana. Noho izany dia mila omena tontolon'ny asa izay ahafahany mamokatra foana farany izay ela. Ny minitra rehetra dia tsy maintsy hamokaran'ireo mpiasa ireo ka tsy tokony ho very amin'ny fiandrasana amin'ny famelomana machine na amin'ny fiandrasana ny kajikajy ataon'ny solosaina izay ela loatra satria manao simulation 3D izy ohatra, na amin'ny ny tsy fiasana noho ny fahafatesan'ny solosaina. Raha tratra izany dia manana tontolon'ny asa tena tsara indrindra sy mba hanamarinana ny karaman'ireo mpiasa ireo. Ho an'izy ireo mantsy dia ny solosaina no tena fitaovana fiasany. Ny vidin'ny tsy fiasan'ireo olona ireo noho ny fahafatesan'ny solosaina na ny faharetan'ny kajikajy ataon'ny solosaina dia lafo loatra noho ny elan'elan'ny vidin'ny PC sy ny workstation. Ny tombombarotry ny workstation mantsy dia tsy azo refesina amin'ny vidiny izay lafo noho ny PC fa amin'ny secondra na minitra na ora tsy fiasan'ilay olona tokony hiasa. Tanjaka azo ho entina farany ambony Ny workstation dia tena faran'izay matanjaka tokoa. Ny applications de simulation, ny modélisation sy rendu 3D, ny kajy statistika sy ara-bola dia mila mémoire betsaka sy mila tanjaka amin'ny fanaovana kajy miara mandeha. Izay ny antony ampiasain'i workstation mampiasa processeur Intel Xeon tahaka ny serveurs ary indraindray aza mety misy processuers roa mihits (système bi-socket). Ny Dell Precision 7910 ohatra dia afaka ny mandray processuer anankiroa Xeon E5-2600 v3 ary manana hatramin'ny coeurs 18. Izany hoe ny workstation tsirairay izany dia afaka ny mitondra hatramin'ny coeurs 36 ankoatran'ireo izay omen'ny accélérateurs graphiques. Vokatry ny fampiasana ny RAM DDR4, ny mémoire an'ireo workstation ireo dia afaka ny ho tonga ho 1 To izay omena an'ireo applications tena mila mémoire. Ireo workstation ireo ihany koa dia namboarina mba afaka ny manafaingana ny fanoratana sy ny famakiana données ao amin'ny disaue dur. Afaka ny asiana disque SSD ihany koa izy ireo izay haingana fiasa (hatramin'ny 180% ny hafainganany) kokoa noho ny SATA. Izy io dia tena manafaingana ny famelomana ny solosaina sy manampy bebekokoa ho an'ireo application izay mampiasa betsaka ny disque dur. Farany, ny fisian'ny teknolojia tahaka ny Intel CAS-W dia mamela ankehitriny ny mahatratra miaraka amin'ny disque dur mahazatra hafainganana manakaiky ny SSD. Izany ohatra dia manafaingana in-3.6 mihoatra ny taux d'image eo amin'ny Adobe After Effects 2015 ary tombony 70% amboniny amin'ny Autocad 2015. Tanjaka graphiques tsy manam-paharoa Ny workstation dia antsoina ihany koa hoe stations graphiques. Izany dia vokatra ny fananny cartes graphiques professionnelles namboarina manokana ho an'ny précision au pixel près an'ny zavatra asehoany. Nefa ny PC dia mampiasa cartes graphiques izay namboarina manokana ho an'ny fisosan'ny jeux tsara kokoa ka tsy miraharaha firy ny ankoatran'izay (ohatra ny approximation an'ireo sary ireo). Ny GPU dia manana toerana avo ao amin'ny kajikahy matihanina izay omena ataon'ny workstation (simulation, rendering en ray-tracing, imagerie médicale, traitements vidéo en temps réel, sns...). Ny workstation dia ampiasaina amin'ny "rendu d'images virtuelles" izay tena ohatran'ny tena izy mihitsy, na amin'ny kajy siantifika satria ny GPU an'ireo carte graphique ireo dia misy an-jatony na indraindray aza an'arivony mihity coeurs voatokana amin'ny kajy mira mandeha. Ireo cartes graphiques natokana ho an'ny workstation toy ny Quadro an'i NVidia sy ny FirePro an'i AMD dia afaka mitondra écran miisa hatramin'ny 32 indray mandeha ary afaka mampiasa tsara ny tanjaky ny écran UHD 4K. Izy ireo ihany koa dia misy ny teknolojia ahafahana mitantana rindrina écran na mampifanaraka sary amin'ny videoprojecteurs maro dia maro. Ny maintenance sy ny fitantanana notsorina Ny fahatokisana dia zavatra tena lehibe mba ahafahan'ny workstation mamokatra tsara. Saingy izy io dia lafiny iray fotsiny ihany amin'ny "disponibilité". Ny lafiny iray dia ny fahatsoran'ny maintenance an'ireo singa ao anatin'ilay workstation, satria ny fahafatesany dia mety hisy. I Dell dia nanamboatra an'ireo boîtiers Precision-ny mba ho haingana ny fanoloana izay atao aminay. Ny disque dur dia afaka azo ety anoloana. Ny alimentation dia mipetraka ao anatin'ny vata kely azo esorina. Ireo singa ireo dia afaka soloina amin'ny hetsika faran'izay tsotra ary tsy mila fitaovana akory aza ary amin'ny fotoana faran'izay fohy. Ny nanamboarana ny boîtier ao anatiny koa dia ahafahana mahazo haingana ny singa toy ny mémoires, cartes grahiques, sns mba ahatsotra ny mainteance sy ny fanavaozana an'ireo singa ireo. Miaraka amin'izay dia tsy maintsy manana fonctionnalités ireo mpiandraikitra an'ireo workstation ireo mba ahafahany mitantana tsara an'ireo solosaina ireo ary ahafahany manao maintenance en condition opérationnelle permanente. Ny processeur Intel dia manana an'ilay antsoina hoe vPro izay ahafahana manova ny BIOS tsy eo amin'ilay solosaina sy ny manao mise à jour an'ireo logicielles ao amin'ilay solosaina na dia maty aza ity farany. Raha ny an'i Dell indra dia misy ny antsoina hoe Dell Client Command Suite izay ahafahana mi-administrer an'ireo workstation ary mi-déployer azy miaraka amin'ny scripts mandeha ho azy ary mampifandray azy ireo ao anatin'ny fitaovana toy ny Microsoft System Center izay afaka mi-administrer workstation maro amin'ny toerana iray. Fanovana tena tsotra sy haingana Ny wokstation dia namboarina ho an'ny famokarana farany haingana. Izy ireo dia manana architecture tena hafa, noheritreretina manokana ho an'ny asa izay omena azy. Ny workstation, tsy toy ny PC, dia afaka configurer-na ilay architecture-ny mba ho tsara tsara kokoa ny fiasany ho amin'ny asa iray, satria ny application matihanina tsirairay dia manana ny maha izy azy toy ny zavatra farany ambany ilainy na ny configurations tena tsara ilainy. Ny Dell dia manana ilay fitaovana hoe "Dell Precision Optimizer" izay manitsy ho azy ny paramètres ao amin'ny BIOS mba ho tena tsara ny fiasan'ny application izay tena ampiasaina ; ohatra ny fanitsina ny Hyper-Threading, ny isan'ny CPU miasa, ny paramètres ho an'ny alimentation, sns ... Ilay logiciel dia misy ny paramètres izay noforonin'ny experts Dell ho an'ireo application certifiés-n'ireo farany. Ilay fitaovana ihany koa dia manome informations eo noho eo sy tatitra amin'ny fampiasana ny processeurs, ny RAM, ny GPU sy ny stockage mba ahafahana mahita haingana ny fanatsarana materialy izay mety hatao mba ahafahana mahazo performance bebe kokoa. Ny workstation dia tsy PC. Izy ireo dia mamaly ny filàna amin'ny famokarana tena tsara an'ireo mpiasa ka manala ny fotoana tsy fiasana amin'ny fanafainganana ny singa tsirairay ao amin'ilay solosaina sy amin'ny fanenana ny mety ahafaty ny solosaina ary ny fanatsorana ny maintenance an'ireo solosaina ireo.
Manana olana goavana i iCloud tao aorinan’ny mise à jour ny windows 10 tamin’ny Okobra
Ilay mise à jour tamin'ny oktobra farany teo izay nomen'i Windows 10, ary mbola naverin'i Microsoft andro vitsivitsy tao aorinan'ny nahitana bug izay mamafa fichier maromaro, dia mametraka olana ho an'ny mpampiasa iCloud. Rehefa mise à jour ny système windows amin'ny version 1809, iCloud dia mety tsy hanao synchronisation intsony na ihany koa mety tsy mety hanao mise à jour an'ireo sary izay zaraina ao. Windows 10 dia mampiseho ihany koa erreur raha hanao installation an'ilay version faran'i iCloud ho an'ny Windows (version 7.7.0.27). Ilay fampitandremana dia miteny hoe ny logiciel an'i Apple dia tsy compatible ka dia tsy mitohy intsony ny installation. Miara miasa ankehitriny i Microsoft sy Apple ny amin'ny famahana an'io olana io. I Apple dia hanome version an'i iCloud afaka ampiasaina eo ambonin'i Windows (version 1809) ato ho ato. Eo am-piandrasana an'izany, Microsoft dia manapaka tsotra izao ny fizarana ny mise à jour tamin'ny oktobra ho an'ireo fitaovana izay efa mampiasa ny iCloud 7.7.0.27.
Internet ho an’ny fivelarany sy ny fandrosoany fa tsy ho loza ho azy
Internet ho an'ny fivelarany sy ny fandrosoany fa tsy ho loza ho an'ny zaza sy ny tanora. Mba ahafahanao miaro ny zanakao dia fantaro tsara ny Internet sy ireo tambajotra samihafa ao aminy; Karohy ary fantaro ireo loza mety hanambana ny zanakao, ateraky ny Internet sy ireo tambajotra samihafa ao aminy; Mahaiza miaro ny zanakao amin'ireo loza ireo Miresaha amin'ny zanakao momba ireo loza ireo Antsoy ny 147 raha hanao fampilazana momba ireo loza ireo ianao Tsidiho ny tranonkala www.arozaza.mg na antsoy ny 147 raha mila torohevitra fanampiny ianao
News - Téchnologie - Ao Raha
FISOLOKIANA AMIN’NY TAMBAJOTRAN-TSERASERA :: Tovolahikely ilay atidoha nikotrika
Sarona ihany. Nahitam-bokany ny fikarohana lalina natao, dimy volana taorian’ny naharaisan’ny pôlisy ny fitarainana voalohany momba ity fisolokiana amin’ny alalan’ny tamba­jotran-tserasera ity. Kaonty « Facebook » an’olona maro no efa lasibatra ary olona maro no efa nahazoan’ilay mpisoloky vola be. Efa misy fomba ampiasain’ity mpisoloky hidirana amin’ny kaontin’ireo rehetra lasibatra, ka angatahany na itrosany vola amin’ireo naman’ilay tomponà kaonty. Tovolahy, vao 21 taona monja dia nahavita teti-dratsy ka saron’ny mpitandro filaminana ity. Nanaovana vela-pandrika tamin’ny alalan’ny fikarohana ny tompon’ilay laharana finday nampiasain’io mpisoloky io saingy nandamòka, na dia azo nofoanana aza ny fakany ireo vola 4 tapitrisa ariary efa azony ka nalefan’ireo lasibatra tamin’io laharana io. Tsy nionona anefa ilay mpisoloky fa dia niverina tamin’ny fomba fanaony indray. Nanakarama olona hividy laharana vaovao mihitsy izy. Olona manodidina ny roapolo no efa nametraka fitoriana, tao anatin’ny telo herinandro lasa teo. Ny laharana vaovao nampiasainy no nokarohina fatratra sy nanaovana ny vela-pandrika indray ary izao nahatrarana ilay tovolahy vao 21 taona izao. L’article FISOLOKIANA AMIN’NY TAMBAJOTRAN-TSERASERA :: Tovolahikely ilay atidoha nikotrika est apparu en premier sur AoRaha.
Ry mpanararaotra : Azo karohina sy tratrarina ianao amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao
Ry mpanararaotra : Azo karohina sy tratrarina ianao amin'ny alalan'ny teknolojia vaovao Misy ny lalàna mipetraka hamaizana anao Raha misy eloka fametsena mikasika fivarotan-tena voatondro ao amin'ny andininy faha-dimy amin'ity lalàna ity dia sazy asa an-terivozona mandritra ny fotoana voafetra no mihatra mahakasika ny fametsena momba ny firaisana ara-nofo mba azahoana manao raharaham-barotra amin'ny zaza latsaky ny 18 taona ; mahakasika ny fametsena momba ny firaisana ara nofo atao amin'ny zaza latsaky ny 15 taona. (andalana faha efatra, Lalàna laharana faha 2014-040, mikasika fandratoana na famarinanan olombelona Ny fikasana rehetra kasaina haparitaka amin'ny alalan'ny fitaovana informatika na elektronika na ny fitanana na ny fandraiketana, na ny famokarana, na ny fakana na fampitana saray na fanehoana ankiza ka manana endrika mamoafady dia hiaran'ny sazy roa taona ka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina, miampy lamandy 2 000 000 Ar ka hatramin'ny 10 000 000 Ar (andalana faha efatra, lalàna laharana faha 2014-006, mikasika ny ady amin'ny heloka eo amin'ny fitaovan-tserasera). Ny fanomezan'ny olon-dehibe hevitra ny zaza tsy ampy taona na ny mitovy aminy hanatanteraka hetsika ara-nofo, ka ampiasany fitaovam-pifandraisana elektronika dia hiharan'ny sady roa taona, miampy lamandy 2 000 000 Ar ka hatramin'ny 10 000 000 Ar. Mety ho lasa dimy taona ka hatramin'ny folo taona an-tranomaizina izany raha toa ka narahina fihaonana mivantana ny tolo-kevitra. (Lalàna laharana faha 2014-006, mikasika ny ady amin'ny heloka eo amin'ny fitaovan-tserasera).